သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများသည်အချိန်မတန်ဘဲပိတ်ထားသလား။ ကျနော်တို့အဖြေရှိသည် Androidsis
တစ်ရက်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲသည် ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် app များစွာ၏အချိန်မတိုင်မီပိတ်သိမ်းခြင်းကိုခံနေကြရသည် ငါတို့မိုဘိုင်းမှာဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ် ဒါပါ Google TV ပါသော Chromecast ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများတွင်ပင်, အတူတူပါပဲဖြစ်ပျက်ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်သွားမလဲ အဖြေကရှင်းရှင်းလေးပဲ။ မင်းတို့အတွက်အဲဒါကိုမင်းအဖြေပေးမယ်။
ဒါက သင်က Tapatalk ကိုဖွင့်လျှင်၎င်းကိုသင်ဖွင့်သည့်အခါပိတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင်ထပ်ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသည်နောက်တစ်ခါပိတ် အက်ပလီကေးရှင်းများစွာနှင့်အတူဖြစ်ပျက်လာသည်နှင့်အသုံးပြုသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုအသုံးမ ၀ င်စေဘဲကြီးလေးသောပြproblemနာကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ကံကောင်းတာကဒီဖြေရှင်းချက်အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1 သင်၏မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်တွင်အသုံးမပြုနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများပိတ်ခြင်းကိုဖြေရှင်းနည်း
2 လုပ်ဆောင်ရန်ပထမအဆင့် - Play Store မှအလိုအလျှောက်မွမ်းမံချက်များကိုပိတ်ပါ
3 ဒုတိယအဆင့် - Android system ၏ WebView
4 Google TV ဖြင့် Chromecast တွင် Android စနစ်မှ WebView ကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း
သင်၏မိုဘိုင်း (သို့) တက်ဘလက်တွင်အသုံးမပြုနိုင်သောအက်ပလီကေးရှင်းများပိတ်ခြင်းကိုဖြေရှင်းနည်း
ပထမ ဦး စွာဘယ်လို Android အသုံးပြုသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူဖြစ်ပျက်သည်၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အလိုအလျောက် update လုပ်ထားမည်မှာသေချာသည် Play စတိုးမှအက်ပ်များ။ ပြီးတော့ပြtheနာကတစ်ခုမှာတစ်ခုရှိတာ Update System မှဤပြသနာများကိုထုတ်ပေးသည်။ Android System Webview.
တစ်ဦးအတွက် ဗားရှင်းအသစ်သည်မသင့်လျော်သောပိတ်ခြင်း၏ဤပြproblemsနာများကိုထုတ်ပေးသည် ငါတို့ချည်နှောင်လျက်ငါတို့ကိုစွန့်ခွာ။ အမှန်မှာ၊ ဂူးဂဲလ်က၎င်းကိုပြုပြင်ပေးသောအသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါက
Android System Webview သည်မည်သည့် app ကိုမဆိုအတွင်းဘရောက်ဇာကိုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည် ထို့အပြင် Tapatalk နှင့်၎င်းတို့အတွင်း URL လိပ်စာများကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုပေးသောအခြားစီးရီးများအကြောင်းကိုများစွာသောသင်သိလိမ့်မည်။
လုပ်ဆောင်ရန်ပထမအဆင့် - Play Store မှအလိုအလျှောက်မွမ်းမံချက်များကိုပိတ်ပါ
ဒါကြောင့်ဒီပြthisနာကိုဂူးဂဲလ်ကဖြေရှင်းသည်အထိအလိုအလျှောက်မွမ်းမံနိုင်အောင် Play Store မှအလိုအလျှောက်အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုပိတ်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်တို့ကို ကျနော်တို့ Side menu ကနေ Settings ကိုသွားပါ Play Store မှဖြစ်သည်
တတိယ option "အပလီကေးရှင်းကိုအလိုအလျောက်အဆင့်မြှင့်ပါ"ကျနော်တို့ကနှိပ်
ဒုတိယအဆင့် - Android system ၏ WebView
ကျနော်တို့ကိုရှာခြင်း Android စနစ် WebView
နောက်ဆုံးသတင်းများကို uninstall လုပ်ပါပြီ
Google TV ဖြင့် Chromecast တွင် Android စနစ်မှ WebView ကိုမည်သို့ဖယ်ထုတ်ရမည်နည်း
Google TV ပါသော Chromecast တွင်အက်ပလီကေးရှင်းအချို့အလုပ်မလုပ်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိသူများအတွက် Movistar + streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်Google TV တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင့်များသည်မတူညီသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့တူညီသောဖြေရှင်းချက်ကိုလိုက်နာပါမည်။
Google Chromecast ရှိချိန်ညှိချက်များသို့သွားပါ
ကျနော်တို့ Applications ကိုသွားပါ
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် "Android System Webview" ကိုရှာသည်။
ယခုတွင်သင်သည် Google TV တွင်ပြanyနာမရှိဘဲပိတ်ထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုစတင်နိုင်သည် Movistar + ကဲ့သို့ပြိုကျခဲ့သော streaming ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ.
အကယ်၍ ၎င်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမှန်သော်လည်း၊ ယင်ကောင်များသည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည် အလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများထပ်မံမပြုလုပ်မချင်းရက်အနည်းငယ်ကြာစောင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ဒီ app ကို update လုပ်ပါ။ ဒီမုန်တိုင်းဒီအတိုင်းမကုန်မချင်းသင့်မှာဒီအဆင့်မြှင့်တင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်လာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများသည်သင်၏မိုဘိုင်း (သို့) Google TV ဖြင့် Chromecast တွင်အချိန်မတန်ဘဲပိတ်ထားပါသလား။ ကျနော်တို့အဖြေရှိသည်